स्वास्थ्य /जिबनशैली – Enepali News
भुईकटहर खानुका यस्ता छन् चमत्कारी फाईदा
गर्मी सुरु भएसगै बजारमा देखिने भुईंकटहरले जसको जिब्रो पनि रसाउँछ । यो वास्तवमै निकै उपयोगी फल हो । यो भिटामिन सीले भरपूर हुन्छ र जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । यसलाई सलाद तथा डेजर्टका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । भुईंकटहरमा भिटामिन सीका अतिरिक्त क्याल्सियम, फाइबर पनि पाइन्छ । यसमा निकै कम मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुन्छ । यसमा पाइने इन्जाइमले खाना पचाउन सहयोग गर्छ । काँचो भुईंकटहरभन्दा पाकेको बढी पौष्टिक हुन्छ । यसमा अन्य फाइदा के–के हुन् त ? १. भुइँकटहरमा ब्रोमेलेन नामक तत्व हुन्छ, जसले सरीरलाई क्यान्सरबाट बचाउन सहयोग गर्दछ । २. भुइँकटहरमा पर्याप्त मात्रामा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जस्ता लवण पाइन्छ जसले हड्डीलाई मजबुत राख्नमा सहयोग गर्दछ । ३. भुइँकटहरमा क्यालोरी कम मात्रामा हुन्छ र यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ । मधुमेहका रोगीले पनि भुइँकटहरको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कुन मौरी पाल्ने ? मह कसरी चिन्ने ? कसरी प्रयोग गर्दा ओखती हुन्छ ? सबै जानकारी एकै ठाउँमा
परागसेचनको अलावा मौरीजन्य उत्पादनः मह, कुट, मैन आदि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने मौरी एपिडी परिवारमा पर्दछन । यस अन्तर्गत नेपालमा पाइने मौरीका जातहरु यस प्रकार छन । १. एपिस सेराना यो स्थानीय मौरी हो । यसलाई एसियन मौरी पनि भनिन्छ । यो घरपालुवा मौरी हो । यो मौरी एक गोलामा करिब २५ देखि ३० हजारको संख्यामा हुन्छन् । यिनीहरू चर्नको लागि बढीमा १ कि.मि.सम्म उडान गर्न सक्तछन् । यसले अध्यारो ठाउमा धेरै चाका बनाई गुड बनाएर बस्ने हुनाले यसलाई घारमा राखी पाल्न सकिन्छ । एक घार मौरीले वार्षिक १५–२० किलो मह उत्पादन गर्न सक्तछ । यो मौरी नेपालका तराइका जिल्ला तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छन् । २. एपिस मेलिफेरा यो आयातित मौरी हो । यसलाई युरोपेली मौरी पनि भनिन्छ । यो पनि घरपालुवा हो । यो मौरीको शरीर सेराना भन्दा ठूलो हुन्छ । यिनीहरूको संख्या पनि एक गोलामा ५०–६० हजार हुन्छ । यिनीहरू ४९५ कि.मि. सम्म च
काठमाडौँ, ३ असार – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले किसानले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारीलाई नै बजारमा ल्याउन प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विचौलियाले काम नगर्दा किसानका तरकारी र फलफूलले बजार नपाए पनि अहिले बजारसम्म ल्याउनका लागि राम्रो व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भट्टले विदेशबाट आयात गर्ने तरकारी फलफूल पनि परीक्षण गरेर मात्र आउने उल्लेख गर्दै स्वेदशमै उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफूललाई पनि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गरेर मात्र उपभोक्ता माझ जाने गरेको बताउनुभयो । मन्त्री भट्टले कोरोना भाइरस जोखिमको अवस्थामा छ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न रहेको र खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिन कृषि उत्पादनल
गर्मीमहिना सरु भइसेको छ। गर्मीमा मानिसको शरीरलाई स्वास्थ राख्‍न एकदमै जरुरी रहन्छ र यसको लागि खानपिनलाई ध्‍यान दिनुपर्ने हुन्छ। गर्मीको समयमा काँक्रा निकै नै उपयोगी हुने गर्छ । यसले शरीरलाई शितल बनाउन मद्धत गर्छ । यसमा ९० % पानी हुने भएकाले यसले गर्मीमा हाम्रो शरीरमा पानीको कमी हुन दिदैन । यो हाम्रो छालाको लागी पनि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसले छालालाई चम्किलो र नरम बनाउन मद्धत गर्छ । यसमा क्याल्सियम, फोसफोरस, सोडियम तथा म्याग्नेसियम प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । काँक्राले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाहरु यस्ता छन् १. पाचन प्रणाली राम्रो बनाउँछ काँक्रोको सेवनले कव्जियत, बायु, एसिडिटी लगायतका पेट सम्बन्धि सबै समस्या हटाउन मद्दत गर्छ । २. मोटोपना कम गर्छ काक्रोमा टारटरेट एसिड नामक तत्व पाइन्छ । जसले शरीरमा उर्जा प्रवाह गर्नुका साथै शरीरको तौल कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै काँक्रोमा कैल
हामी विहान उठेर नास्ता गर्छौं । स्वास्थ्यका लागि नास्ता अनिवार्य मानिन्छ । हुन त कतिपयले बिहानको नास्ता अनुपयुक्त हुने तर्क पनि गर्छन् । पछिल्लो समय खानपान सम्बन्धी बढेको सर्तकता र स्वास्थ्य सचेतनाले गर्दा धेरैले बिहानको नास्ता गर्छन् । नास्ताले दिनभरका लागि शरीरलाई उर्जा दिन्छ । त्यसैले बिहानको नास्ता हेभी तर स्वस्थ्यकर हुनुपर्छ भनिन्छ । बिहान ओछ्यान छाड्नसाथ मनतातो पानी पिउनुपर्छ । यो कुरालाई पनि धेरैले पालना गर्दै आएका छन् । मनतातो पानी पिउँदा त्यसले शरीरका भित्री अंगहरुलाई सक्रिय तुल्याउनका साथै पाचन यन्त्रलाई राम्रो गर्छ । दिनको सुरुवात मनतातो पानीबाट विज्ञापनमा ‘हरेक दिनको सुरुवात चियासँग’ भनिएपनि अहिले धेरैले मनतातो पानीबाट दैनिकी सुरु गर्छन् । चिया भनेको दुध, चिनी मिश्रति चियालाई बुझिन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ । जबकी ग्रीन टि वा अग्र्यानिक अर्थोडक्स चिया भने लाभदा
घिउ कुमारी सर्व गुणकारी मानवहीतमा प्रकृतिले दिएको बरदान यसलाई आयुर्वेदमा संजिवनी मानिन्छ । छालाको सुरक्षादेखि कपालको सौन्दर्यता र घाउँ भर्ने समेतको कार्य यसबाट हुने गर्दछ । एलोवेराको जुस नियमित पिउने व्यक्ति कहिल्यै विमार रहन्न । जोड्नी दुखेमा रक्तसंचारको रुपमा एलोवेरालाई बेजोड् मानिन्छ । एलोवेराले कपाल चुडिनबाट जोगाउँने तथा कपाललाई सेतो हुनबाट रोक्ने गर्दछ । दैनिकरुपमा सुत्नुभन्दा अगाडी गोडामा लगाएमा गोडा फुट्नबाट बचाउँछ । यस्ले छालाको नरमपनलाई कायम राख्दछ । औषधोपचार १. आँखाको रोगमा आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । २. कानको रोगमा कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा